Igodo ime nhicha miri emi n'ụlọ | Bezzia
Igodo iji mee nhicha miri emi n'ụlọ
Nke Torres | 14/05/2022 16:00 | Home
Ime nhicha miri emi n'ụlọ site n'oge ruo n'oge dị mkpa nwee ahụ iru ala nke ụlọ a haziri nke ọma na nke dị ọcha na-enye. Ọzọkwa n'ihi na ọ bụ ụzọ kasị mma iji chekwaa akụkụ ọ bụla nke mejupụtara ụlọ ruo ogologo oge. Ebe ọ bụ na, n'agbanyeghị uru akụ na ụba ya, iji nlezianya dị mma, ihe gị nwere ike ịnọgide na-adị mma ruo ogologo oge.
Iji mee ihicha miri emi, ị ga-eche echiche karịa ọrụ nkịtị, ebe ọ bụ na ọ bụghị maka ikpochapụ ma ọ bụ ihicha nke ọma. A usoro nhicha dị mma gụnyere ịkwapụ arịa ụlọ, Na-ehicha ebe ndị na-adịghị ahụ anya, kpochapụ ihe ndị na-adịghịzi eje ozi ma ọ bụ na-emegharị ihe ndị a na-achọ mma na-enyere aka mee ka ụlọ ahụ dịkwuo mma.
1 Igodo 4 maka nhicha miri emi
1.1 Nhazi maka ịrụ ọrụ ka ukwuu
Igodo 4 maka nhicha miri emi
Nhazi bụ isi ihe na-eme ka ihe ịga nke ọma, na nke a na n'ọrụ ọ bụla ị ga-arụ. Enweghị ezigbo atụmatụ, ihe niile na-aghọ ọgba aghara, ọ na-ewe ogologo oge, ọ ga-abụkwa ọrụ na-agwụ ike nke na-ahapụkarị oge ọzọ. Ya mere, malite site na ịmepụta ndepụta ime ihe nke ị ga-edepụta ihe ndị dị mkpa, ndị na-adịghị ọcha mgbe mgbe dị ka ọnụ ụlọ nke ngwá ụlọ, drawer ma ọ bụ n'azụ ngwa.
Kwadebe arịa niile ị ga-achọ ka ị ghara inwe ihe niile n'aka ma ghara igbu oge mgbe ịmalitere. nhicha. Inwe nnukwu akpa mkpofu ga-enyere gị aka ịtụba ihe niile na-agbakọba na drawer ma ọ dịghịzi aba uru. Maka ngwaahịa ihicha, ọ dịghị mkpa ka ị na-eji ngwaahịa maka ihe niile, na mmiri, detergent, ọcha ọcha mmanya na soda soda ga-ezuru oke. Ugbu a anyị nwere nkwadebe gara aga, ka anyị hụ ihe bụ isi ihe dị na nhicha miri emi.
Nhazi maka ịrụ ọrụ ka ukwuu
ndị drawer: Wepụ drawer na ajụjụ na na-atụfu ihe dị n'ime ya n'ala. Hichaa drawer na mmiri ọkụ na ncha na mgbe ọ na-akpọnwụ, tụfuo ihe na-abaghị uru. N'ụzọ dị otú a, ị ga-etinye obere oge ihicha na ịhazi drawer.
Wepu ngwá ụlọ: Behind ngwá ụlọ a otutu unyi accumulates, nakwa dị ka n'okpuru ha, n'ihi na ha bụ ebe ndị siri ike ịnweta. Iji nweta ihicha miri emi ọ dị mkpa ịrụ ọrụ na mpaghara ndị a. Tụfuo arịa ụlọ ka ọ dị ntakịrị. wepụ ya ma hichaa mgbidi zoro ezo, ala nke dị n'okpuru ngwá ụlọ na azụ azụ n'onwe ya.
Mgbidi: O nwere ike ọ gaghị ahụ anya na anya gba ọtọ, ma akụkụ nke mgbidi na uko ụlọ na-anakọta ájá, ụmụ ahụhụ, udide ududo na ụdị irighiri ihe niile. Iji hapụ mgbidi ahụ ka ọ dị ọhụrụ, naanị ị ga-etinye akwa microfiber na broom dị ọcha. Wepu uzuzu na ihe fọdụrụnụ, n'ikpeazụ nyefee ákwà mgbochi mmiri na mmanya ọcha iji gbochie ụmụ ahụhụ ịbịarute ebe ahụ ruo oge ụfọdụ.
Ngwa ụlọ: Idebe ha ọcha dị ezigbo mkpa n'ihi na ha bụ akụkụ nke kichin, ebe a na-esi nri kwa ụbọchị. Ma site n'oge ruo n'oge ọ dị mkpa ime nhicha nke ọma iji ruo ebe ndị ahụ na-adịchaghị mfe. Wepụ ngwa ahụ, kpochaa ya n'azụ, nakwa ala na mgbidi nke zoro ezo. Kewaa iberibe, na nkenke, rụọ ọrụ nke ọma ka ịhapụ ngwa ahụ ka ọ dị ọhụrụ.
Ime ka ụlọ dị ọcha nke ọma na-ewe oge, n'agbanyeghị otú ị na-eme ka ụlọ ahụ dị ọhụrụ. Ya mere ị ghaghị were ya dị mfe ma nyefee otu ụbọchị na mpaghara ọ bụla. N'ụzọ dị otú a, ị gaghị enwe nkụda mmụọ site n'itinye oge dị ukwuu ekpochi na nhicha ụlọ. Lelee kalenda ma mee atụmatụ otu ụbọchị kwa izu iji nyefe onwe gị na nhicha miri emi nke otu oghere. Chetakwa na ihicha ụlọ bụ ọrụ dịịrị ndị niile bi n’ime ya. Ejila ọrụ niile ibu onwe gị ibu, hazie ọrụ ndị ahụ, yabụ na ị ga-ewe obere oge iji hapụ ụlọ zuru oke.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Home » Igodo iji mee nhicha miri emi n'ụlọ
Gịnị mere o ji dị mkpa ikpo ọkụ na gbatịa mgbe ị na-eme egwuregwu?